ဂျီတော့ခ်ချည်း သုံးနေမယ့်အစားလာ့ဂ်တင်ပါလား။ – Zox Zin Min
Written by Zox Zin Min October 19, 2009
10 thoughts on “ဂျီတော့ခ်ချည်း သုံးနေမယ့်အစားလာ့ဂ်တင်ပါလား။”
ဘီလို တတ်ဂ် ရေးရမလဲ 😀
ရေးပေးပါ့မယ် ကို Zox ဒီနေ့မှ တဂ်တစ်ခုပြီးလို့ နောက်နေ့ရေးပေးပါ့မယ်. . . တဂ်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်. .. စာရေးဖြစ်တာပေါ့. . .
အင်း… ခက်တာက မြန်မာပြည်မှာစာအုပ်မဖတ်တဲ့သူက တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပိုများလာတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ကိုစာရေးခိုင်းရင် ကျားအမြီးဆွဲခိုင်းသလို ထွက်ပြေးကြမှာ….. ဘလော့မှာက အီလို့လည်းမရ၊ ကျူဖို့လည်းမလွယ်ဆိုတော့ မဘလော့ချင်ကြဘူးပေါ့လေ…. နောက်တစ်ခုက ရေးချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်.. နေ့အိပ်မက်ဆို သူငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကို လိုက်မေးဖူးတယ်…. တော်တော်များများက ဘလော့ချင်တယ်ဆိုတာချည်းပဲ… ဒါပေမဲ့ သူတို့မလုပ်တတ်တာနဲ့၊ ကျော်ရခွရတာ နားမလည်တာနဲ့တင် စာရေးချင်တဲ့စိတ်ကပျောက်သွားတာ…… ခုmmgeniusလိုမျိုးပေါ်လာတာတော့ ဘလော့ဂါတွေအတွက် အားတက်စရာပေါ့ မြန်မာပြည်မှာ ဘလော့ဂါတွေ အခုထက်မက ပိုများလာစေချင်တာတော့ အမှန်ပဲ.. ကိုzoxရဲ့ စေတနာကိုတော့ တကယ်လေးစားတယ်… ခုဒီပို့စ်ကိုဖော်ဝပ်မေးလ်လုပ်လိုက်ပါလား.. ဘလော့ချင်တဲ့သူများ များလာလေမလားလို့…. တစ်ယောက်လည်းတစ်ယောက်ပေါ့လေ..
လာလည်သွးတာ ကျေးဇူးပါ.. အစ်ကိုပြောသလိုပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်.. အခုခေတ်က ချက်တင်တွေပဲများနေတာ..
အင်း… ချက်တင်းကိုတော့ စိတ်ပူတာ အမှန်ပဲ … ကျနော့်ညီမလေးတွေကို အင်တာနက်သင်ပေးတုန်းကလည်း ချက်နဲ့ ဘလော့ကို တူတူ သင်ပေးတာ … မဟုတ်ရင် ချက်ကို စိတ်တအားပါသွားမှာစိုးလို့ … မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် တဂ်ထားတဲ့အတွက် ကျနော်ကလည်း မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ရေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာ….
မနေအိမ်မက်ပြောသလိုပဲ ဗျ ဘလော့ရေးဖို့ အတားအစီးက များသားဗျ ဒီ တဂ်လုပ်ထားတာလေးတွေစုပြီး ဖော်ဝက်လုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဗျ ကျနော်ရေးပြီးပြီနော် စိတ်ဆိုးရဘူးနော် ဟီးဟီး
ဟုတ်တယ်ဗျာ အတွေးတူတယ် ကျွန်တော်လဲ ဘလော့ လုပ်ချင်တယ်ဆို တတ်နိုင် သမျှ ကူညီပေးတယ်။
You can read my post your tag. I am writing to your tag. ok
ရေးထားတာကောင်းတယ်ဗျာ… တက်ဂ်ပို့စ်ကိုတော့ ရေးပေးပါမည်။ နောက်ကျနေရင်လည်း ခွင့်လွတ် သယ်ရင်းရေ…. အလုပ်များနေလို့… အကြွေးမှတ်ထားနော်… လာမည်.. နည်းနည်းကြာမည်ပေါ့ဗျာ..။ 😛
Previous Post ကျွန်တော်နှင့် Rainbow Hotel
Next Post အန်းတားသည် ဘလော့ဂ်ဂင်း